Voaheloka Ho Faty Ao Kafkastan · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Marsa 2015 3:16 GMT
Raha efa namaky ny “The Trial (Ny Fitsarana)” nosoratan'i Franz Kafka ianao, dia ho fantatrao ny dikan'ny voambolana hoe “Kafkaesque”.
Zato taona taorian'ny nanoratana “Ny Fitsarana”, miharihary fa nanafoana ireo karazana endrika tsi-refesi-mandidy sy fanjakam-birao ny olombelona. Tsy misy olona tsy manantsiny miakatra fitsarana intsony. Manjaka manerana izao tontolo izao ny rafitra mahombin'ny fitsarana. Vokatry ny fisaintsainako ity nofy ity, izay nananako taorian'ny famakiana ny tantara. Fahadisoan'ny zavamisy ihany izay mety ho kisendrasendram-pitoviana.
Tonga tao amin'ny efi-pitsarana izahay. Miditra ny efitrano ny mpitsara ary manambara ny fisokafan'ny fotoa-pitsarana ny mpiraki-draharaha. Mipetraka ny mpitsara ary manomboka mamaky ny taratasy: “Rehefa avy nandinika ny porofo nomen'ny mpitory sy ny voampanga, nahita izahay fa meloka tamin'ireo fiampangana azy ireo voampanga. Manameloka ireo voampanga 1, 2 sy faha-3 hovonoina ho faty izahay noho ny famonoana polisy manampahefana efa nomanina mialoha. Manameloka ireo voampanga laharana faha-4 hatramin'ny faha-11 higadra mandrapahafaty kosa izahay noho ny fandraisana anjara tamin'ny famonoana polisy manamboninahitra. Mangataka amin'ny Minisitry ny Atitany ihany koa izahay mba hanafoana ny maha-olom-pirenena ireo voampanga laharana voalohany hatramin'ny faha- 8 noho ny heloka fampihorohoroana. Misintona ny fitsarana”.
“Inona no mahatonga anao matoky be tahaka izany?” hoy i A nanontany. “Satria tsy mampiseho mariky ny nenina ny fihetsikao,” hoy i H namaly. Nisento lalina i A ary nilaza hoe: “Mahatonga ahy toy ny nahavita izay nanamelohana ahy ve ny tsy fisian'ny nenina amiko?” Namaly tamin'ny feo manesoeso i H:” Tsy mampiseho nenina noho ny heloka bevava ireo meloka, fa mampiseho nenina noho ny fahatratrarana azy ireo. Ianao, eo amin'ny lafiny iray, mampiseho fa tsy misy nenina na: Muselmann ianao. ” Inona izany Muselmann? ” hoy i A nanontany.
“Hanaiky tsy maintsy ho faty noho ny heloky ny olon-kafa ianao?! Lazao ahy azafady hoe ahoana no nilazana anao fa meloka? ” hoy i H.”Nanolotra fijoroana vavombelona nosoniavina aho fa tany am-piasana tamin'ny fotoana nitrangan'ny loza. Nanapa-kevitra tsy hiraharaha ny fisian'izany ny mpitsara. Hoy i A.
“Mazava ho azy fa tsy hiraharaha tokoa izy”, hoy i H. “Mora kokoa ny mahita olona meloka. Mamarana ny fanadihadiana izany. Ary tsy zava-dehibe ny fahitana izay meloka. Raha ny marina, tsy miraharaha ny olona ny fitsarana ara-poko: novonoina ny iray “amintsika”, ka tsy maintsy mizaka izany ny telo “amin'izy ireo”. Hifaly avy eo ny olona avy etsy ankilany. Na dia ny haino aman-jery aza hanadino hilaza izay zavatra momba anao. Hoesorina aminao izay rehetra mamaritra anao. Holazaina fa mpikambana ao amina vondrona ara-poko iray ianao. Hahazo valisoa ny mpitsara; hahazo fifanarahana vaovao mitentina an-tapitrasany ny rahalahiny sy ny rainy”
Ity tantara ity, araka ny voalazako, dia noforonina ihany. Tsy misy firenena eto an-tany manasazy olona tsy manan-tsiny hovonoina ho faty. Ary tsy misy olona voasazy ho faty miandry fanavotana.